Vaovao - Fitsidihana fiverenan'ny mpanjifa
Guanyu dia mino foana fa ny mahafa-po ny mpanjifa dia manan-danja toy ny fiainana. Androany, manara-maso ny kalitaon'ny vokatra izahay ho an'ny Liqun Pharmaceuticals.
Nanadihady ireo mpiasa laharana teo amin'ny lalam-pamokarana izahay ary tena afa-po amin'ny boaty lozisialy novokarin'ny Guanyu Group izy ireo. Nilaza ireo mpiasa fa ny boaty lozisialy dia nahatonga ny tsipika famokarana misavoritaka., Hamafiso ny famokarany. Ny boaty lozisialy dia mandeha tsara eo amin'ny tsipika famokarana, ary ny fanamafisana ny anti-slip eo amin'ny farany ambany dia mahatonga ny boaty lozisialy tsy hidina. Ny lozisialy efa voafaritra mialoha momba ny kaody fanaovana marika mba hanamora ny fanasokajiana zava-mahadomelina
Liqun pharmaceutement Group dia nilaza fa ny boaty lozisialy novokarin'i Qingdao Guanyu Plastic Co., Ltd. dia mahafeno ny filan'ny Liqun Group ary hiara-hiasa amin'i Guanyu amin'ny indostria hafa toy ny supermarket amin'ny ho avy.
Ny boaty lozisialy novokarin'i Qingdao Guanyu dia mety ampiasaina amin'ny indostria maro. Ny taolan-tehezana eo ambanin'ny boaty dia mahatonga ny boaty lozisialy ho mateza kokoa.
Ny plastika Guanyu dia manolo-tena amin'ny fametrahana orinasam-pitaovana fananganana trano fonenana, mitahiry ny mpanjifa isaky ny vidin'ny lozisialy fananganana trano, ary mahatonga ny lozisialy fanodinam-bola ho lasa teboka fitomboana tombony vaovao ho an'ireo orinasa.
Amin'ny ho avy, Qingdao Guanyu dia hanohy hanaraka ny traikefan'ny mpampiasa ary hiezaka hanome anao vahaolana logistika tsara kokoa.
Bins fitehirizana plastika azo stackable, Stack & Hang Bins, Tranon-tahiry azo itehina, Fametrahana fantsom-pifidianana, Tavoahangy plastika mifatotra, Fametahana fitoeram-bokatra,